Ciidamada amniga oo gacanta ku soo dhigey askarigii ka dambeeyey dilka Deeqo… – Hagaag.com
Ciidamada amniga oo gacanta ku soo dhigey askarigii ka dambeeyey dilka Deeqo…
Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho, ayaa sheegaya in ciidamada amniga ay gacanta ku soo dhigeen askarigii ka danbeeyay dil duhurnimadii shalay muqdihso loogu geystay gabar 9 Sano jir eheyd oo lagu magacaabi jiray Deeqo Daahir Faarax.
Gabadhan oo ka baxday shalay dugsigii ay wax ka baraneysay ee Hoyga Xamar, ayaa haleeshay rasaas uu riday askari kamid ah Ciidanka dowladda, kaasoo markii danbe goobta isaga baxsaday.
Gabadhan oo saarneyd gaariga Iskuulka ayaa rasaasta ka haleeshay qeybta sare ee jirka, xili gaariga ay ka dajinayeen arday kale oo gawaraida la saarneyd, xiligaas waxaa rasaas dhowr jiho u ridayay askar ka carooday wadada oo mashquul eheyd.
Saraakiil kamid ah laamaha amniga ayaa inoo sheegay in gacanta lagu soo dhigay askariga la rumeysanyahay in rasaastii uu furay gabadha haleeshay, Sidoo kale askariga waxaa lala soo qabtay laba askari oo kale oo la socotay xiliga uu falkaasi dhacayay.
Soo qabashada askartan waxey ka danbeysay markii Saaka lagu xiray xarunta Wasaarada Gaashaandhiga Sarkaalka ay ilaalinayeen Ciidankan oo lagu magacaabo Sheegoow, kaasoo markii danbe u yeeray askartiisa, sidaasna isaga lagu sii daayay.
Saddexda askari ee la soo qabtay, waxey haatan ku xiranyihiin Xarunta danbi baarista ee C.I.D, Halkaas oo lagu weydiinayo Su’aalo la xiriirta sida falka u dhacay.
Si Kastaba, waxaa maanta Muqdisho lagu aasay Allaha u naxariistee Deeqa Daahir Faarax oo shalay rasaasta askariga furay ku geeiryootay, Gabadhan Sagaal sano jirka eheyd, waxey Iskuulka Hoyga Xamar ku biirtay oo kaliya sanadan, Iyadoo maanta aaney wax shaqa ah ka jirin Dugsigii ay dhiganeysay.